Ọpụpụ 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Izrel katọrọ Mosis n’ihi nri (1-3)
Jehova nụrụ ntamu ndị Izrel (4-12)
E nyere ndị Izrel nnụnụ kwel na mana (13-21)
Mana agaghị ada n’Ụbọchị Izu Ike (22-30)
E dowere mana ka ọ bụrụ ihe ncheta (31-36)
16 Mgbe nzukọ Izrel niile si n’Ilim pụọ, ha mechara bịarute n’ala ịkpa Sin,+ nke dị n’agbata Ilim na Saịnaị, n’abalị iri na ise n’ọnwa nke abụọ ha pụtachara n’Ijipt. 2 Nzukọ Izrel niile wee malite ịkatọ* Mosis na Erọn n’ala ịkpa ahụ.+ 3 Ndị Izrel nọ na-asị ha: “Ọ gaara akara anyị mma ma a sị na Jehova ji aka ya gbuo anyị n’Ijipt mgbe anyị nọ ọdụ n’akụkụ ite anụ,+ mgbe anyị nọ na-eriju nri afọ. Ugbu a unu akpọpụtala anyị, kpọta anyị n’ala ịkpa a ka ụnwụ gbuo ọgbakọ a niile.”+ 4 Jehova wee sị Mosis: “M ga-eme ka achịcha si n’eluigwe zooro unu ka mmiri.+ Kwa ụbọchị, onye ọ bụla n’ime ndị m ga-aga kporo nke ga-ezuru ya n’ụbọchị,+ ka m wee nwalee ha mara ma hà ga-erube isi n’iwu m ka ọ̀ bụ na ha agaghị erube isi.+ 5 Ma n’ụbọchị nke isii,+ ha ga-ekporo ihe ha na-ekporo n’ụbọchị ndị ọzọ okpukpu abụọ ma kwadebe ya.”+ 6 Mosis na Erọn wee gwa ndị Izrel niile, sị: “Ná mgbede, unu ga-amara n’eziokwu na ọ bụ Jehova kpọpụtara unu n’Ijipt.+ 7 N’ụtụtụ, unu ga-ahụ ebube Jehova n’ihi na ọ nụla nkatọ unu na-akatọ* Jehova. Ole ndị ka anyị bụ mere unu ga-eji na-akatọ* anyị?” 8 Mosis kwukwara, sị: “Mgbe Jehova ga-enye unu anụ unu ga-eri ná mgbede, nyekwa unu achịcha n’ụtụtụ nyejuo unu afọ, unu ga-amata na Jehova anụla nkatọ unu na-akatọ ya.* Ma, ole ndị ka anyị bụ? Ọ bụghị anyịnwa ka unu na-akatọ, kama ọ bụ Jehova.”+ 9 Mosis wee sị Erọn: “Gwa nzukọ Izrel niile, sị, ‘Bịanụ nso n’ihu Jehova n’ihi na ọ nụla ntamu unu na-atamu.’”+ 10 Ozugbo Erọn gwachara nzukọ Izrel niile okwu, ha tụgharịrị chee ihu n’ala ịkpa ahụ. Ma lee, ebube Jehova pụtara n’ígwé ojii.+ 11 Jehova gwakwara Mosis, sị: 12 “Anụla m ntamu ndị Izrel na-atamu.+ Gwa ha, sị, ‘Ná mgbede,* unu ga-eri anụ. N’ụtụtụ, unu ga-erijukwa achịcha afọ.+ Unu ga-amarakwa na m bụ Jehova bụ́ Chineke unu.’”+ 13 Ná mgbede ahụ, nnụnụ kwel fedatara ju n’ebe ha mara ụlọikwuu.+ N’ụtụtụ ya, igirigi dara kpuchie ebe niile ha mara ụlọikwuu. 14 Mgbe igirigi ahụ kọrọ, e nwere iberibe ihe dị mụrụmụrụ juru n’ala ịkpa ahụ.+ Ha dị mụrụmụrụ ka mkpụrụ mmiri n’ala. 15 Mgbe ndị Izrel hụrụ ya, ha malitere ịsị ibe ha, “Gịnị ka ọ bụ?” maka na ha amaghị ihe ọ bụ. Mosis sịrị ha: “Ọ bụ achịcha Jehova nyere unu ka unu na-eri.+ 16 Jehova nyere iwu, sị, ‘Onye ọ bụla ga-ekporo ole ọ ga-erichali. Unu ga-agbakọ mmadụ* ole unu dị n’ụlọikwuu unu, unu ga-ekporokwa otu oma*+ maka otu onye.’” 17 Ndị Izrel malitere ime otú ahụ. Ha kpooro ya. Ụfọdụ kpooro nnukwu, ụfọdụ ekporo ntakịrị. 18 Mgbe ha ji oma* tụọ ya, e nweghị ihe mafọọrọ onye kpooro nnukwu. Nke onye kpooro ntakịrị zukwaara ya.+ Onye ọ bụla n’ime ha kpooro ole ọ ga-erichali. 19 Mosis wee sị ha: “Onye ahapụla ihe ọ bụla n’ime ya ruo ụtụtụ.”+ 20 Ma ha egeghị Mosis ntị. Mgbe ụfọdụ ndị hapụrụ ụfọdụ n’ime ya ruo ụtụtụ, ọ gbara ikpuru ma siwe ísì. Mosis wee wesa ha iwe. 21 Ha na-ekporo ya kwa ụtụtụ. Onye ọ bụla na-ekporo ole ọ ga-erichali. Mgbe anyanwụ chasiwere ike, ọ na-agbaze. 22 N’ụbọchị nke isii, ha kpooro okpukpu abụọ nke ihe ha na-ekporobu,+ ya bụ, oma* abụọ maka otu onye. Ndị niile so ná ndị isi nzukọ Izrel bịara kọọrọ ya Mosis. 23 O wee sị ha: “Ọ bụ ihe Jehova kwuru. Echi, onye ọ bụla ga-ezu naanị ike.* Ọ bụ ụbọchị izu ike dị nsọ a ga-edebere Jehova.+ Nke unu chọrọ iji mee achịcha, jirinụ ya mee achịcha. Nke unu chọrọ isi esi, sienụ ya.+ Dowekwanụ nke ọ bụla fọrọ, dowenụ ya ruo ụtụtụ.” 24 Ha dowere ya ruo ụtụtụ, otú Mosis nyere n’iwu. O sighị ísì, ikpuru adịghịkwa na ya. 25 Mosis wee sị: “Rienụ ya taa, n’ihi na taa bụ ụbọchị izu ike a na-edebere Jehova. Unu agaghị ahụ ya n’ala taa. 26 Ụbọchị isii ka unu ga-ekporo ya. Ma n’ụbọchị nke asaa, bụ́ Ụbọchị Izu Ike,+ e nweghị nke ga-adị.” 27 Ma, ụfọdụ n’ime ha gara ka ha kporo ya n’ụbọchị nke asaa, ma e nweghị ihe ha hụrụ. 28 Jehova wee sị Mosis: “Ruo ole mgbe ka unu ga-ajụ ime ihe m kwuru na idebe iwu m?+ 29 Burunụ n’obi na Jehova enyela unu Ụbọchị Izu Ike.+ Ọ bụ ya mere o ji enye unu ihe unu ga-eri ụbọchị abụọ n’ụbọchị nke isii. Onye ọ bụla ga-anọ n’ebe o bi. Onye apụkwala apụ n’ụbọchị nke asaa.” 30 Ndị Izrel wee debe Ụbọchị Izu Ike* n’ụbọchị nke asaa.+ 31 Ndị Izrel kpọrọ achịcha ahụ “mana.”* Ọ na-acha ọcha ka mkpụrụ kọrịanda, ọ na-atọkwa ka keeki dị mbadamba e ji mmanụ aṅụ mee.+ 32 Mosis wee sị: “Jehova nyere iwu, sị, ‘Kpopụta mana ga-eju otu oma* ka ọ bụrụ ihe a ga-edowe ruo ọgbọ unu niile,+ ka ha wee hụ achịcha m nyere unu ka unu rie n’ala ịkpa mgbe m si n’Ijipt na-akpọpụta unu.’” 33 Mosis wee sị Erọn: “Were otu ite kponye mana ga-eju otu oma* ma dowe ya n’ihu Jehova ka ọ bụrụ ihe a ga-edowe ruo ọgbọ unu niile.”+ 34 Erọn dowere ya n’ihu Ihe Àmà ahụ+ ka ọ dịgide n’ebe ahụ, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 35 Ndị Izrel riri mana ruo afọ iri anọ,+ ruo mgbe ha batara n’ala ebe ndị mmadụ bi.+ Ha riri mana ruo mgbe ha bịarutere n’ókè ala Kenan.+ 36 Otu oma* bụ otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa.*
^ Ma ọ bụ “ịtamu ntamu n’ihi.”
^ Ma ọ bụ “ntamu unu na-atamu n’ihi.”
^ Ma ọ bụ “na-atamu ntamu n’ihi.”
^ Ma ọ bụ “ntamu unu na-atamu n’ihi ya.”
^ O nwere ike ịbụ n’agbata oge anyanwụ dara na mgbe chi bidoro iji.
^ Oma bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu oma bụ lita 2.2. Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “ga-edebe ụbọchị izu ike.”
^ Ma ọ bụ “wee zuo ike.”
^ O nwere ike ịbụ na e si n’okwu Hibru pụtara “Gịnị ka ọ bụ?” nweta aha a.
^ Efa bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu efa bụ lita 22. Gụọ B14.